Isaya 25 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
25 Haiwa Jehovha, ndimi Mwari wangu.+ Ndinokukudzai,+ ndinorumbidza zita renyu,+ nokuti makaita zvinhu zvinoshamisa,+ zvamakaronga+ kubvira panguva yepakutangatanga, nokutendeka,+ nokuvimbika.+ 2 Nokuti makaita guta murwi wematombo, makaita taundi rakavakirirwa dongo riri kukoromoka, makaita kuti shongwe inogarwa nevanhu vokumwe isava guta, risingazombovakwizve kunyange nokusingagumi.+ 3 Ndokusaka vaya vari rudzi rwakasimba vachizokukudzai; iro taundi remarudzi anodzvinyirira, richizokutyai.+ 4 Nokuti mava nhare kumunhu akaderera, nenhare kumurombo pakutambudzika kwake,+ nekwokupotera padutu rine mvura, nomumvuri+ pakupisa, mhepo yevanodzvinyirira painenge yakaita sedutu rine mvura rinorovera pamadziro. 5 Munokurira ruzha rwevanhu vokumwe, sokukurirwa kunoita kupisa nomumvuri wegore+ munyika isina mvura. Irwo rwiyo rwevanodzvinyirira runokundwa.+ 6 Zvino mugomo+ iri, Jehovha wemauto achaitira marudzi ose+ mabiko ezvokudya zvine mafuta,+ mabiko ewaini yakachengetwa iri pamusoro pemasese, ezvokudya zvine mafuta zvizere nomwongo,+ ewaini+ yakachengetwa iri pamusoro pemasese, yakasvinwa.+ 7 Mugomo iri iye achaparadza chifukidziro chinofukidzira marudzi ose,+ nechirukwa chakarukirwa pamarudzi ose. 8 Chokwadi achaparadza rufu nokusingaperi,+ uye Changamire Ishe Jehovha achapukuta misodzi pazviso zvose.+ Achabvisa kuzvidzwa kwevanhu vake panyika yose,+ nokuti iye Jehovha azvitaura. 9 Pazuva iroro mumwe munhu achati: “Tarirai! Uyu ndiye Mwari wedu.+ Takatarisira kwaari,+ uye iye achatiponesa.+ Uyu ndiye Jehovha.+ Takatarisira kwaari. Ngatifarei, tifarire kuponesa kwake.”+ 10 Nokuti ruoko rwaJehovha ruchagara pagomo iri,+ uye Moabhi ichatsikwa-tsikwa+ munzvimbo yayo sepanotsikwa-tsikwa murwi wemashanga munzvimbo ine mupfudze.+ 11 Achatambanudza maoko ake pakati payo sokutambanudza maoko kunoita anoshambira kuti ashambire, uye achaderedza kuzvikudza kwayo+ nokufambisa-fambisa maoko ake kwokunyengera. 12 Achaparadza guta rakavakirirwa, nemasvingo ako akakwirira okuchengeteka, acharideredza, achariwisira pasi, muguruva.+